Allgedo.com » Dad Tabar yar oo lacago kaalmo ah loogu qeybiyay gudaha degmada Baardheere (Maqal iyo Masawirro)
Dad Tabar yar oo lacago kaalmo ah loogu qeybiyay gudaha degmada Baardheere (Maqal iyo Masawirro)
Print here| By: allgedo.com: Sunday, October 29, 2017 // u Jawaab
Ku dhowaad ilaa 250 ruux oo isugu jira Rag iyo dumar,islamarkaana laga soo dhex xuley qeybaha kala duwan ee Bulshada ku dhaqan degmada Baardheere ayaa bishan Oktoobar waxay heleen deeq lacageed oo ka timid mid ka mid ah Hay,adahaSamafalka,iyadoo qofkastaaba uu helay lacag dhan $107.
Dadka la siiyey lacagaha deeqda ayaa ahaa dhamaantood kuwadhibanayaal ah oo qaarkood dhimirka looga jiro muddo ka badan ilaa 30 sanno , halka inta kalena ay ahaayeen kuwa la nool cudurada iyo kuwo naafo ah oo aan awoodin in ay wax qabsadaan.
Raxmo Geedi waa hooyo 70 sanno jir ah oo dhashey dhibane nuurow Aden oo Xanuunsanaa muddo ka badan ilaa 20 sanno,waxayna sheegtay lacagtaasi in wax badan ay ka tartey Nolosha wiilkeeda oo dhimirka loogu jiro, iyadoo sheegtayna kaalmada soo gaartey oo dhameyd lacag dhan $107 in ay ugu iibisey waxyaabaha uu u baahnaa oo ay ka mid ahaayeen sida Raashinka, Daawada, Dharka iyo qalabka xaga hoyga.
Sidoo kale Xasan Sh Maxamed Daahir waa Aabaha dhaley wiil dhibanaha ah ee lagu magacaabo C/qaadir Xasan Sh Maxamed Daahir oo xanuun sanaa muddo ka badan ilaa 6 sanno wuxuu sheegay in Mobailkiisa ay ku soo dhacdey lacag dhan $107, xili baahiweyn u qabey in uuwiilkiisa u iibiyo Raashin,Dhar iyo Daawo.Balse markuu arkay ay ku abuurantay rajo nolaleed oo qoyskiisa wax u gaban karo.
“Magaceyga waa Xasan sheekh Maxamed waxaana aan dhaley, isla markaana aan wakiil kaahay C/qaadir mobailkeyga maanta waxaa ku soo dhacay lacag dhan $107 waad arkeysaan beesadii Wiilkeyga oo xanuunsanaa muddo 6 sanno ah ayaan ugu adeegayaa, waxaana u iibiyey daawooyin, Caano costo, raashin iyo dhar, lacagtani wax weyn ayey ka tareysaa nolosha wiilkeyga xanuunsan iyo mida qoyskeena sidaasi waxaa yiri Xasan Sh Maxamed Daahir oo ah Aabaha dhaley wiil dhibanaha ah ee lagu magacaabo C/qaadir Xasan Sh Maxamed Daahir.
Waxaan iskudaynay in aan la sheekaysano dhibane Cabduqaadir laakiin daruufta caafimadkiisa darteeda noo ma surtagalin in uu nooga Jawaabo su’aaalaheena ku saabsanaa sida nolashiisa wax uga bedeshay lacagta deeqda ah ee uu helay.
Sucaado abuukar Cismaan waxay wakiil katahay Haadi Macow Cismaan oo muddo 9 sanno ah la xanuunsanaa xaga dhimirka,waxayna sheegtay in mobailkeedu uu ku soo dhacay lacag dhan $107, islamarkaana ay ugu iibisey haadi, Daawo, Raashin, Dhar iyo Caano, iyadoo intaasina ku dartey in ay ku faraxsan tahay lacagtaasi, waxna ay ka tareyso nolosha dhibanaha.
Dadka dhibanayaasha ah ee ka faa,ideystay deeqdani lacageed ayaa waxaa laga soo kala xuley 8da xaafadood ee ay ka kooban tahay degmada Baardheere, waxaana soo xulistoda ka qeyb qaatey guddiyada xaafadaha, Culimada, Maamulka degmada iyo UrurkaHaweenka.
Kaalmadani lacageed oo sida la sheegay socondoonta muddo 3 bilood ah ayaa ah tii ugu horeysay oo la gaarsiiyo dad loo arkey in ay ku dhiban yahiin degmada, isla markaana ayan waxba qabsan karin.
Hoos ka dhageyso codka qaar ka mid ah dadkii lacagta loo qeybiyay: